EternalEnvy ရောကျရှိပွီးနောကျ ပှဲပေါငျး ၁၇ ပှဲ ဆကျတိုကျရှုံးနိမျ့သှားခဲ့တဲ့ Cloud9 အသငျး – Gaming Noodle
မွောကျအမရေိက Esports အဖှဲ့အစညျးကွီးတဈခုဖွဈတဲ့ Cloud9 ရဲ့ Dota2အသငျးဟာ ယခု DPC season အတှငျးမှာ ရှုံးပှဲပေါငျးမြားစှာနဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ Cloud9 အသငျးဟာ TI4 မှာ အဆငျ့ ၅ နရောအထိရရှိခဲ့ဖူးပွီး ထိုစဉျက အသငျးထဲမှာ ယခုလိုပဲ EternalEnvy နဲ့ pieliedie တို့ ရှိနခေဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ သူတို့ ၂ ဦး ပါဝငျတဲ့ Cloud9 ဟာ ပှဲအတျောမြားမြားမှာ အရေးနိမျ့လကျြရှိပါတယျ။
Cloud9 TI4 Roster (Bone7, EE, PieLieDie, SingSing, Aui_2000)
လကျရှိ Cloud9 အသငျးသားမြားဖွဈကွတဲ့ EternalEnvy, Ace နဲ့ Sneyking တို့ ၃ ဦးဟာ အသငျးထဲကို လှနျခဲ့တဲ့ တဈလခနျ့ကမှ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ကွတာပါ။ သူတို့ ရောကျရှိလာခြိနျက စ လို့ Cloud9အသငျးဟာ DOTA Summit 12 ကနေ လကျရှိ BTS Pro Series: Americas အထိ ပှဲပေါငျး ၁၇ ပှဲအထိ ဆကျတိုကျရှုံးနိမျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး WeSave! Charity Play မှာတော့ တဈပှဲအနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။
ပွိုငျပှဲမြားတဈလြှောကျမှာ Cloud9 ဟာ Evil Geniuses နဲ့ Team Liquid တို့လို ထိပျတနျးအသငျးမြားကိုသာ ရှုံးနိမျ့တာ မဟုတျပဲ Thunder Predator, CR4ZY နဲ့ Business Associates တို့လို ထိပျတနျးစာရငျးမဝငျတဲ့ အသငျးမြားကိုလညျး ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ EternalEnvy ရဲ့ mid role ဟာ Cloud9 အသငျး ဆကျတိုကျရှုံးနိမျ့နရေခွငျးရဲ့ အကွောငျးအရငျးမြားထဲကတဈခု ဖွဈနပေါတယျ။
EternalEnvy ဟာ mid role ကို အလှနျကွိုကျနှဈသကျသူဖွဈပွီး pub ပှဲမြားမှာရော ပွိုငျပှဲမြားမှာပါ mid lane သှား ကစားလရှေိ့သူပါ။ ဒါပမေယျ့ လတျတလောပွိုငျပှဲမြားမှာတော့ သူ့ရဲ့ mid ဟာ အမွဲအရေးနိမျ့နလေရှေိ့ပွီး အသငျးရဲ့ offlane နဲ့ carry မြားထကျ net worth နညျးသှားလရှေိ့ပါတယျ။ ရှုံးပှဲအခြို့မှာဆိုရငျ EternalEnvy ဟာ Cloud9 ရဲ့ support ကစားသမား Misery ထကျတောငျ net worth နညျးနတောကို တှမွေ့ငျခဲ့ကွရပါတယျ။
မကွာသေးမီက ကစားခဲ့ကွတဲ့ Cloud9 နဲ့ Thunder Predator တို့ရဲ့ ပထမဆုံးပှဲမှာ ဒီကိစ်စဟာ အလှနျထငျရှားနခေဲ့ပါတယျ။ ယငျးပှဲအပွီး Cloud9 တို့ရှုံးနိမျ့သှားခြိနျမှာ EternalEnvy ရဲ့ Ember Spirit ဟာ Misery ရဲ့ support ဟီးရိုး Rubick ထကျ net worth 0.7 k နညျးနခေဲ့ပါတယျ။ တဈဖကျအသငျးက mid lane ဟီးရိုး Shadow Fiend ကတော့ ပှဲအဆုံးမှာ KDA 11/2/8 အထိ ရရှိသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Thunder Predator နဲ့ ဒုတိယပှဲမှာ EternalEnvy ဟာ mid lane ကိုပဲ Nature Prophet ကိုငျပွီး သှားရောကျခဲ့ပါတယျ။ တဈဖကျအသငျးက Legion Commander လာထိနျးခဲ့ပွီး ပှဲအပွီးမှာ KDA 11/3/9 အထိ ရယူသှားခဲ့ပွနျပါတယျ။ ပှဲအတှငျးမှာ Cloud9 တို့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ အမှားတဈခြို့ဟာလညျး ပရိသတျမြားကွား ဝဖေနျစရာကိစ်စတဈခုဖွဈနခေဲ့ရပါတယျ။
Cloud9 Standing in BTS Pro Series : America
မညျသို့ပငျဖွဈစေ Cloud9 တို့ဟာ လာမယျ့ရကျမြားအတှငျးမှာ BTS Pro Series: Americas ရဲ့ ပှဲစဉျမြားကို ဆကျလကျယှဉျပွိုငျကစားကွဦးမှာပါ။ အစဉျအလာကောငျးခဲ့ဖူးတဲ့ Cloud9 အသငျးကို ပွနျလညျဦးမော့လာစဖေို့ Dota2ပရိသတျအမွောကျအမြားက လိုလားလကျြရှိကွပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
EternalEnvy ရောက်ရှိပြီးနောက် ပွဲပေါင်း ၁၇ ပွဲ ဆက်တိုက်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တဲ့ Cloud9 အသင်း
မြောက်အမေရိက Esports အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cloud9 ရဲ့ Dota2အသင်းဟာ ယခု DPC season အတွင်းမှာ ရှုံးပွဲပေါင်းများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ Cloud9 အသင်းဟာ TI4 မှာ အဆင့် ၅ နေရာအထိရရှိခဲ့ဖူးပြီး ထိုစဉ်က အသင်းထဲမှာ ယခုလိုပဲ EternalEnvy နဲ့ pieliedie တို့ ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ သူတို့ ၂ ဦး ပါဝင်တဲ့ Cloud9 ဟာ ပွဲအတော်များများမှာ အရေးနိမ့်လျက်ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ Cloud9 အသင်းသားများဖြစ်ကြတဲ့ EternalEnvy, Ace နဲ့ Sneyking တို့ ၃ ဦးဟာ အသင်းထဲကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လခန့်ကမှ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ ရောက်ရှိလာချိန်က စ လို့ Cloud9အသင်းဟာ DOTA Summit 12 ကနေ လက်ရှိ BTS Pro Series: Americas အထိ ပွဲပေါင်း ၁၇ ပွဲအထိ ဆက်တိုက်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး WeSave! Charity Play မှာတော့ တစ်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲများတစ်လျှောက်မှာ Cloud9 ဟာ Evil Geniuses နဲ့ Team Liquid တို့လို ထိပ်တန်းအသင်းများကိုသာ ရှုံးနိမ့်တာ မဟုတ်ပဲ Thunder Predator, CR4ZY နဲ့ Business Associates တို့လို ထိပ်တန်းစာရင်းမဝင်တဲ့ အသင်းများကိုလည်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် EternalEnvy ရဲ့ mid role ဟာ Cloud9 အသင်း ဆက်တိုက်ရှုံးနိမ့်နေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းများထဲကတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။
EternalEnvy ဟာ mid role ကို အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး pub ပွဲများမှာရော ပြိုင်ပွဲများမှာပါ mid lane သွား ကစားလေ့ရှိသူပါ။ ဒါပေမယ့် လတ်တလောပြိုင်ပွဲများမှာတော့ သူ့ရဲ့ mid ဟာ အမြဲအရေးနိမ့်နေလေ့ရှိပြီး အသင်းရဲ့ offlane နဲ့ carry များထက် net worth နည်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ရှုံးပွဲအချို့မှာဆိုရင် EternalEnvy ဟာ Cloud9 ရဲ့ support ကစားသမား Misery ထက်တောင် net worth နည်းနေတာကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။
မကြာသေးမီက ကစားခဲ့ကြတဲ့ Cloud9 နဲ့ Thunder Predator တို့ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲမှာ ဒီကိစ္စဟာ အလွန်ထင်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ ယင်းပွဲအပြီး Cloud9 တို့ရှုံးနိမ့်သွားချိန်မှာ EternalEnvy ရဲ့ Ember Spirit ဟာ Misery ရဲ့ support ဟီးရိုး Rubick ထက် net worth 0.7 k နည်းနေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်အသင်းက mid lane ဟီးရိုး Shadow Fiend ကတော့ ပွဲအဆုံးမှာ KDA 11/2/8 အထိ ရရှိသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Thunder Predator နဲ့ ဒုတိယပွဲမှာ EternalEnvy ဟာ mid lane ကိုပဲ Nature Prophet ကိုင်ပြီး သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်အသင်းက Legion Commander လာထိန်းခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးမှာ KDA 11/3/9 အထိ ရယူသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ပွဲအတွင်းမှာ Cloud9 တို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတစ်ချို့ဟာလည်း ပရိသတ်များကြား ဝေဖန်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Cloud9 တို့ဟာ လာမယ့်ရက်များအတွင်းမှာ BTS Pro Series: Americas ရဲ့ ပွဲစဉ်များကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြဦးမှာပါ။ အစဉ်အလာကောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ Cloud9 အသင်းကို ပြန်လည်ဦးမော့လာစေဖို့ Dota2ပရိသတ်အမြောက်အများက လိုလားလျက်ရှိကြပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။